I-Sycamore Cottage-iMarike yeKrisimesi yaseWinchester
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPoppy
Indawo yokufihla egqibeleleyo kufutshane neWinchester Christmas Market.
Imaisonette yeebhedi ezi-2, enesango labucala, igadi yabucala kunye neendawo zokupaka ezikhululekileyo. ISycamore House ikwintliziyo yelali yaseTwyford eyothusayo, umgama oziikhilomitha ezi-3 uhamba emanzini ukuya kumbindi wesixeko saseWinchester esinembali. Indawo yaseTwyford ilungile kuhambo oluhle, ukukhwela ibhayisekile ebukekayo kunye ne-pubs ezifudumeleyo nezinobuhlobo, kunye neBugle Inn edumileyo kukuhamba nje imizuzu embalwa ukusuka endlwini.
Le ndlu inamagumbi okulala amabini (i-1 Kumkani kunye ne-1 kabini), indawo yokuhlala epholileyo kunye ne-quirky kunye neyokutyela-ilungele ukuhlalisana okanye ukuphumla ngefilimu elungileyo, igumbi lokuhlambela elibanzi elineshawari efakelweyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lendlu yasefama kunye nendawo ebanzi. igadi yabucala ebamba ilanga ixesha elininzi losuku.
Indawo yalapha ijikelezwe ngohambo olumnandi ecaleni komlambo, ukufikelela ngokulula kwi-South Downs Way, iindawo ezintathu zokushicilela ezishushu ngokumangalisayo nezipholileyo kumgama wokuhamba kwaye okona kulungileyo kuko konke, umgama omangalisayo we-3 yeemayile ukuya eWinchester.
IWinchester sisixeko esidlamkileyo nesinembali, isixeko samaxesha aphakathi esiqhayisa ngezinto ezininzi ezinomtsalane, iindawo zokutyela ezintle kunye nemivalo emikhulu.
I-Sycamore House iyibhalansi egqibeleleyo phakathi kokuphunyuka kwelizwe kunye nekhefu lesixeko.
Ivenkile ekoneni ikuhambo lwesibini sesibini ukusuka endlwini. Ayiyiyo nayiphi na ivenkile ekwikona, le gem ikhethekileyo ibonelela ngoluhlu lweemveliso zalapha ekhaya, izinto eziphathwayo ngesandla esimnandi, i-oyile enokuphinda isetyenziswe, iisosi njl.
Ngaphantsi kwevenkile ekoneni kukho ikhefi ethandekayo nenobubele, ebizwa ngokuba yiBean Ngezantsi - ilungele indawo yebhrantshi yempelaveki.
Kukho ii-pubs ezintathu kumgama wokuhamba-iBugle Inn, iBridge Inn kunye nePhoenix. Ukutya kunye nenkonzo kwiBugle ibalasele, uphononongo luyathetha ngokwalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Poppy
Ndiza kuqhagamshelwa kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho kwaye ndingavuya ngakumbi ukucebisa ezinye iindawo ezintle onokuzindwendwela, ukwenza ukuhlala kwakho kubaluleke ngakumbi!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Twyford